12-30-2012 11:53 AM #1
KIA နှင့် ABSDF တို့ အင်အား ၅၀၀ကျော်ထိမ်းချုပ်ထားသောလဂျားယမ်တောင်ကြောတစ်ခုလုံး အားအစိုးရတပ်များမှသိမ်းပိုက်
(၃၀-၁၂-၂၀၁၂) ရက်နေ့ နေလယ်တွင် KIA နှင့် ABSDF တို့ အင်အား ၅၀၀ကျော်ထိမ်းချုပ်ထားသောလဂျားယမ်တောင်ကြောအားအစိုးရ တပ်များမှသိမ်းပိုက်
ရရှိခဲ့ကြောင်း ၄င်းဒေသတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အရာရှိတစ်ဦးမှ Online မှတဆင့်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့တပ်တွေ လဂျားယန်တောင်ကြော်တစ်ခုလုံးကိုဒီနေ့နေ့လည်မှာရပါတယ် ။
KIA အဖွဲ့တွေကတော့ ယောက်၅၀ လောက် အလောင်းတွေကျန်နေပါတယ်။ အသေးစိတ်စာရင်းမရသေးပါဘူး လက်နက်တွေမိုင်းတွေ အများကြီးရပါတယ်။ ထို့ပြင် ဒါဏ်ရာရတဲ့ KIA စစ်သည် ၄၀ဦးခန့်ကိုလည်း ဆေးဝါးကုသပေးလျက်ရှိကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။
ဖမ်းဆီရမိသူအများစုမှာ KIA အဖွဲမှအတင်းအားဓမ လူသစ်စုဆောင်းခံထားသူများဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမှပြောကြားသည်။ ကျွှန်တော်တို့အခု၇ထားတဲ့ စခန်ကနေ KIA ဌာနချုပ်လိုင်ဇာကို လမ်းမြင်နေရပါတယ်။
လက်နက်ကြီးတစ်ကမ်းပါဘဲ ဒါပေမဲ့ကျွှန်တော်တို့တပ်တွေ လိုင်ဇာကိုတိုက်ဖို့အစီစဉ်မရှိပါဘူး ဟု၎င်းမှ Email မှတဆင့်ပြောဆိုသွားသည်။ ၄င်းကကျွှန်တော်တို့ ဒီစခန်းကိုဒီနေ့နေ့လည်လောက်ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ် ။
အခုစခန်းကသိမ်းဆီးရမိတဲ့ Laptop နဲ့ တရုတ် ဖုန်းကတဆင့် Internet သုံးပြီး မေးလ်ပို့လိုက်တာပါ။ အထောက်အထားဓါတ်ပုံတွေလည်းဆက်ပြီးပို့ပေးသွားမှာ ပါဟု ၄င်းပေးပို့သော Email တွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
Aung Naing Thu Facebook
august, badinf, barronbala, batoe, block, deidei, devilgrin89, fergusan, GuruAM, Hollinaz, honelay86, icy, Jim, k-pooh, khit, ko too, kokothaw, ktg, little caesar, LU SHAY, Ma Ni, MATRIX, MNO.BN, RunAtServer, shadow69, thet2006, thuthuaung, yankanar, zero6
12-30-2012 12:07 PM #2
ကေအိုင်အေ စစ်ဦးစီးချုပ် ၏ အမိန့်ဖြင့် ယခုအခါ လိုင်ဇာတမြို့လုံး မိုင်းများ လိုက်လံတပ်ဆင်နေကြောင်း လိုင် ဇာမြို့ တစ်မြို့လုံးအား မိုင်းခွဲကာ မြေလှန်စနစ်ဖြင့် ဖျက်ဆီးပြီးမှ နောက်ဆုတ်မည်ဖြစ်ေ ကြာင်းယခု နာရီပိုင်းလေးအတွင်းမှာပင် သတင်းရရှိထားပါသည်။
တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများသည်လိုင်ဇာနော က်ဆုံးခံစစ်စည်းကိုကျော်သည်နှင့် ကေအိုင်အေ၏ လက်ရွှေး စင်သစ္စာခံများသည် မိုင်းကွင်းများခင်းကာ ကြိုစောင့်နေပြီး တောင်စောင်းများ၊ ဖုံးကွယ်ထားသော ကွန်က ရစ်ဘန်ကာများထဲမှစိန်ပြောင်းများဖြင့်တိုက်ခို က်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့မှမထိန်းနိုင်ပါကတပ်မတော်စစ်ကြောင်း များ မြို့တွင်းရောက်သည်နှင့် မြို့အတွင်းတွင် အသင့်ထောင်ထားသော မော်တာ ဗုံးသီးများအား ဝါယာ ကြိုးများဖြင့် ဗုံးတစ်တွဲလျှင် ၁၆ လုံးစီပါရှိသည့် ပဒေသာ မိုင်းတွဲဟု ခေါ်ဝေါ်သည့် မိုင်းများဖြင့် တစ်မြို့လုံး အား ဖောက်ခွဲပြီး မြေလှန် ဖျက်ဆီး ထားခဲ့မည်ဖြစ်သည် ။လိုင်ဇာမြို့ထဲ ခြေချလာမည့် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများကိုသာမက မြို့နေလူထုကိုပါ တစ်ပါတည်း သတ်ဖြတ်ကာ မြေလှန် လက်စတုန်းမည့် နည်းဗျူဟာ ဖြစ်သည် ။
ယခုအခါ မြို့တွင်း ရှိ မြို့နေလူထုနှင့် ဒုက္ခသည်များအား မည်သည့်နေရာမှ ထွက်ခွါခွင့်မပေးသည့်အပြင် အိမ်ပြင်ထွက်ခွင့်ပင်မပေးတော့သည့် အခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေပါသည် ။ လွန်ခဲ့သော ၄ နာရီခန့် က မြစ်ကြီးနားမြို့နေ ဒေါ်အေးအေးဝင်းဆီသို့ လိုင်ဇာမြို့တွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့်နေထိုင်နေသော ညီမဝမ်းကွဲ မှ"မမရေ.ဒို့တတွေ ဒီတစ်သက်ပြန်တွေ့ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး"ဟု ငိုယိုကာ ဖုန်းဆက် လာ သဖြင့် အကျိုး အကြောင်းမေးမြန် ဖုန်းပြောနေရင်း ဖုန်းလိုင်း အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက် သွားပါသည် လိုင်ဇာမြို့ တွင် အကြီးဆုံးအရာရှိ မှာဗိုလ်မှူးကြီး၂ ဦးသာ ကျန်ရှိနေပြီးဗဟို ကော်မတီ ဝင် ခေါင်းေ ဆာင်ကြီး များ နှင့်ကေအိုင်အေ စစ်ဘက် အရာရှိကြီး တို့သည် လူမြင်ကွင်းမှ ပျောက်ကွယ် နေသည်။ တမြို့လုံး အပြောအရ ဟိုဘက်ကမ်း (တရုတ်) သို့ကူးသွားပြီဟု အခိုင်အမာ ပြောဆိုခဲ့ပါသည် ။
august, aungbanthar, badinf, barronbala, batoe, block, blooddiamond6, devilgrin89, domeno, fergusan, honelay86, Jim, k-pooh, khit, ko too, kokothaw, little caesar, LU SHAY, Ma Ni, mgmgthan, MNO.BN, PiNyat, RunAtServer, shadow69, springnet1997, thet2006, thuthuaung, yankanar, zero6
12-30-2012 03:02 PM #3
KIO / KIA ထိန်းချုပ် နယ်မြေ အတွင်းရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများ၌ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ၆၅၀၀၀ ကျော် ရှိ
KIO/KIA ထိန်းချုပ် နယ်မြေ အတွင်းရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများ၌ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ၆၅၀၀၀ ကျော် ရောက် ရှိနေကြောင်း KIO မှ ဖွဲ့စည်းထားသော ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒူဘီဆား က ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် Eleven Media Group သို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဒုက္ခသည် စခန်းများအနက် လိုင်ဇာမြို့အနီးရှိ Je Yang ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး ထိုစခန်း ၌ မိုးမောက်မြို့နယ်အတွင်းမှ စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည် ၇၀၀၀ ကျော် ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရပါ သည်။ Je Yang ဒုက္ခသည် စခန်းအပါအ၀င် လိုင်ဇာမြို့အနီးတ၀ိုက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဒုက္ခသည် စခန်းများ များ၌ ဒုက္ခသည် ၁၄၀၀၀ ကျော် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
KIO/KIA ထိန်းချုပ် နယ်မြေ အတွင်း၌ လိုင်ဇာမြို့အနီးတ၀ိုက် အပါအ၀င် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် တလျှောက် တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဒုက္ခသည် စခန်းအရေအတွက်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရပါ သည်။
"စာရင်းအနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ စစ်ဘေး ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၆၅၃၁၀ ဦး ရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ ကချင်ေ တွပါ။ ရှမ်းတစ်ချို့လည်း ပါပါတယ်”ဟု ဒူဘီဆားက ပြောပါသည်။
ဒုက္ခသည် စခန်းအတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာသော ဒုက္ခသည်များကို နေ့စဉ် ဆန် နှစ်ဗူးနှင့် ဟင်းစားဖိုး ငွေကျပ် ၂၀၀ ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် နေ့စဉ် ဆန်နှစ်ဗူးကိုသာ လုံလောက်စွာ ပေးနိုင် သည့် အခြေအနေသာရှိကြောင်း ဒူဘီဆားက ဆက်လက် ပြောပြသည်။ ထို့အပြင် အသုံးအဆောင် အ၀တ် အထည်နှင့် ဆေးဝါး ကူညီ ထောက်ပံ့ရေး ဆိုင်ရာ များတွင်လည်း လိုအပ်ချက်များ ရှိနေကြောင်း သိရပါ သည်။
KIO/KIA ထိန်းချုပ် နယ်မြေ အတွင်း၌ ဒုက္ခသည်စခန်းများကို KIO မှ အဓိက ထောက်ပံ့မှုများ ပြုလုပ်ေ နရပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းမှ ခရစ်ယန်ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"Je Yang ဒုက္ခသည်စခန်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ စဖွင့်ခဲ့တာပါ။ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေ စဖွင့်ပြီးနောက် အခုချိန်ထိ ကူညီထောက်ပံ့မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်က တရုတ်ငွေ သိန်း ၉၀ မြန်မာငွေနဲ့ တွက်ရင် ကျပ် သိန်း ၆၀၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်”ဟု ဒူဘီဆားက ပြောသည်။
KIO/KIA ထိန်းချုပ် နယ်မြေ အတွင်းရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ UN အပါ အ၀င် အခြား NGO အဖွဲ့ အစည်းများမှ ထောက်ပံ့မှုအချို့ ရှိသော်လည်း နည်းပါးကြောင်း သိရသည်။ "UN ကတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင် ဘာလတုန်းက ကားနှစ်စီးစာ ထောက်ပံ့သွားတယ်။ အဲတာ နောက်ဆုံးပါပဲ”ဟု ဒူဘီဆားက ပြောပါ သည်။
စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန်အတွက် မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို ကြိုဆိုကြောင်းနှင့် ၄င်းတို့ အနေဖြင့် ဒုက္ခသည် ကူညီရေးအတွက် လာရောက်သော မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမျှ တားဆီးခြင်း မရှိကြောင်း ဒူဘီဆားက ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်မတော်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(KIA) တို့အကြား တိုက်ပွဲ များ မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန် လျက်ရှိနေ ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ အစိုးရတပ်များနှင့် KIA တို့အကြား တိုက်ပွဲပေါင်း ၂၄၀၀ ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များ ပိုမိုများပြားလျက်ရှိနေပြီး အစိုးရ ထိန်းချုပ် နယ်မြေ အတွင်း၌ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် အရေအတွက် တစ်သိန်းနီးပါးနှင့် KIO/KIA ထိန်းချုပ်နယ်အတွင်း၌ ဒုက္ခသည် အရေ အတွက် ခြောက်သောင်းကျော် ရှိနေသဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်ဘေးဒုက္ခသည် တစ်သိန်ြးေ ခာက်သောင်းကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
badinf, barronbala, batoe, devilgrin89, fergusan, honelay86, Jim, ko too, ktg, little caesar, Ma Ni, mgmgthan, nail, RunAtServer, springnet1997, thuthuaung, yankanar, zero6
12-30-2012 03:06 PM #4
လဂျားယန် စခန်းကျ သွားရင်တော့ ကေအိုင်အို ဌာနချုပ်ရှိရာ လိုင်ဇာ ရဲ့ လုံခြုံရေး အခြေအနေက စိတ်မချ ရတော့
တိုက်ပွဲကြောင့် နှစ်ဖက် ကျဆုံးတဲ့အခြေအနေကိုတော့ အခုအချိန်အထိ မသိရသေးတဲ့ အပြင် အစိုးရတပ်က ဗန်းမော်၊၀ိုင်းမော်နဲ့ရှတန်ပါ ဆိုတဲ့ နေရာတွေကနေ စစ်ကြောင်း ၃ကြောင်းနဲ့ အင်အားထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ ကေအိုင်အို စခန်းတွေကို တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ ကိုလဆိုင်းက ဆက်ပြောပြပါတယ်။
“နမ့်ဆန်ယန်ဘက်ရယ်၊ ဒေါ့ဖုန်းယန်ဘက်မှာရယ် အခု လက်ဂျားယန်ရယ် ဗဟိုနယ်မြေပေါ့ ၃နေရာကို တခါတည်းသူက ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ အသံတွေကြားနေရတာပေါ့ လက်ဂျားယန်ဘက် ထိုးလာတာကတော့ ကျနော်တို့ခန့်မှန်းအရဆိုရင် အင်အား ၄၀၀ ကျော် ၅၀၀ ၀န်းကျင်ရှိမယ်ထင်တာပဲ၊ သူတို့ကလဲ မရရအောင်ထိုးစစ်ဆင်နေမဲ့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ”
badinf, barronbala, batoe, devilgrin89, fergusan, Grace, honelay86, Jim, KaungKinPyar, khit, ko too, ktg, little caesar, Ma Ni, mgmgthan, Phantom, PiNyat, RunAtServer, springnet1997, thuthuaung, yankanar, zero6
12-30-2012 03:14 PM #5
လဂျားယန် တောင်ကြား တစ်ခုလုံးအား တပ်မတော်မှ ထိန်းချုပ် နိုင်ခဲ့ပြီဟု သိရှိရ
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စစ်ပွဲများအတွင်း အရပ်ဖက်ပစ်မှတ် များကို လုံးဝတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်တွင် စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် အရာရှိကြီး တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့အရပ်ဖက်ပစ်မှတ်တွေကိုလုံးဝမပစ်ပါဘူး၊ အထက်ကလဲအရပ်ဖက်ပစ်မှတ်တွေကို မပစ်ဖို့ အမိန့် ထုတ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်အောက်ကတပ်တွေကိုလဲ အရပ်ဖက်ပစ်မှတ်ကို လုံးဝမထိ ဖို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ် ”
“ကျွန်တော်တို့ စစ်သည်တွေထိခိုက်ကျဆုံးမှုတွေ အများဆုံး ဖြစ်တာက အရပ်ဖက်ပစ်မှတ်တွေ ကို ရှောင်နေလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကမပစ်ပေမဲ့ KIA ကတော့ အရပ်သားတွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီး ကျွန်တော်တို့ကို တိုက်ခိုက်တာတွေရှိပါတယ်။ အခု KIA ရှေ့တန်း မှာ စစ်တိုက်ခိုင်းနေတဲ့ စစ်သားလေးတွေ ဟာ မနေ့တစ်နေ့ကမှ လူသစ်စုသင်တန်းတစ်ပတ်နှစ် ပတ်ပေး ပြီး သေနတ် ဆင်ပေးလိုက်တဲ့ ရှမ်းလူ မျိုးတွေ များပါတယ်။ မသိနားမလည်တဲ့ ကလေးစစ်သားတွေ ကို ရှေ့တန်း ကနေအသေခံ တိုက်ခိုင်းနေ ကြပါတယ်’’ ဟု ပြောဆိုသွားသည်။
Internet တွင်တွေ့ရှိရသော KIA မှ စွပ်စွဲထားသည့် အရပ်သားများဒဏ်ရာရသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းမှ အဲ့ဒါတွေလုံးဝ မမှန်ပါဘူး၊ သေတဲ့လူဆိုတဲ့ သူဟာလဲ KIA စစ်သားပါ၊ တစ်ပုံထဲမှာ KIA စစ်ဝတ် စုံတောင်မချွတ်ထားပါဘူး၊ ကျန်တဲ့ ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေဟာလဲ KIA ရဲ့ဝါဒဖြန့်မှုသက် သက်တွေပါ ဟု ပြောဆိုသွားသည်။ ၃၀-၁၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့ထိ တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိပြီး နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်တွင် လိုင်ဇာသို့စိုးမိုး ထားသော လဂျားယန် တောင်ကြား တစ်ခုလုံးအား အစိုးရတပ်များက ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည် ဟု သိရှိရသည်။
badinf, barronbala, batoe, devilgrin89, fergusan, Grace, GuruAM, Hollinaz, honelay86, ironhorse, Jim, KaungKinPyar, khit, ko too, ktg, little caesar, LU SHAY, Ma Ni, mgmgthan, nail, PiNyat, RunAtServer, silence, thet2006, thuthuaung, yankanar, ywathitgyi, zero6
12-31-2012 01:14 AM #6
Thanked 107,502 Times in 3,643 Posts
awGaum?qdk;wmawGygtHhrcef;zG,f&mMuHKawG h&onfhESpfjzpfygonf/ edKifiHa&;qdkwmenf;enf;av;rSem;rvnfwJholawGutmPm&vmjyD;wu,fwrf;
omxGef;um;wJhedKifiHuvlowfwJhvufeufr&Sd? arwåmw&m;vufeuf yJ&SdwJhbk&m;om;awmfawGudkpdrfajyeajy&uf&ufpufpufESdrfESif ;cJhygw,f/
a': atmifqef; pkMunftwGufpdwfnpfp&m?pdwf&SKwfaxG;p&mawGjzpfcJh&
ygw,f/ bkd;bdk;atmif 'grSr[kwfaysmufapq&mvdk hjynfolawmfawmfrsm;
rsm;ua': atmifqef; pkMunfudkxifaeMuygw,f/ olwdkhzufudkrvdkuf
awmhb*FgvDuwrsdK; ?ucsifuwzHktxifvJGcJhMuygw,f/ jynfyc&D;w
tmPmydkifawGuvkyfcsifwmvkyfjyD;tJh'Dt&SKyfxkwfua': atmifqef; pkMunfqDyJaemufqHk;awmha&mufvmwmcsnf;ygyJ/vufyHawmif;awmif
AungNN, badinf, BainnowSAYAR, barronbala, devilgrin89, Devil_Killer, fridayborn, GuruAM, happyvalley, Hollinaz, honelay86, Incubuz, ironhorse, johncracker, k-pooh, ko too, ktg, maykyalzin, mgmgthan, MNO.BN, ngatetpyar, orjawlan, Oscar Htun, robin76, RunAtServer, springnet1997, zero6
12-31-2012 01:34 AM #7
'DZifbmv 24&uf 2012
jrpfBuD;em;-Aef;armf vrf;aMumif;&§d KIA wyfrsm;tm;vkH; 'DZifbmv 25 &ufaeYaemufqkH;xm; ½kyfodrf;ay;&ef wyfrawmfr§ KIA odkY 'DZifbmv23 &ufaeYwGif taMumif;Mum;cJhaMumif; od&§d&onf/
''raeYu ('DZifbmv 23 &ufaeY) nrSm wdkif;rSL;u uGßefawmfhudkajym w,f/ jrpfBuD;em;-Aef;armf vrf;aMumif;r§m&§dwJh KIA wyfawGudk 25 &ufaeY aemufqkH;xm;NyD; qkwfcGmay;zdkYtwGuf? ½kyfodrf;ay;zdkYtwGuf pmudk w&m;0iftaMumif;Mum;ay;yg qdkNyD; ajymvmw,f” [k Nidrf;csrf; a&; aqG;aEG;yGJ azmfaqmifa&;tzGJU0if OD;vrdkif*Grf*smu 'DZifbmv 24 &ufaeYn 10 em&DwGif ajymMum;cJhonf/
OD;vrkdif*Grf*smu “tJ'gudk uGßefawmfwdkY tzGJUu 'DuaeY ('DZifbmv 24 &ufaeY) r§m KIA udk taMumif;Mum;cJhygw,f/ 'DudpöeJY ywfoufNyD; KIA bufu wkHYjyefwmuawmh 'Daeh KIO Nidrf;csrf;a&; aqG;aEG;a&;tzGJY acgif;aqmif OD;qvGwfcrfuae jynfaxmifpk Nidrf;csrf;a&; aqG;aEG;a&; tzGJU 'kwd,OuúX OD;atmifrif;xH taMumif;jyefvdkufygw,f/ wdkif;r§L;ay;ydkYwJhpmonf KIA udk &mZoHcswJhtaeeJY trdefYay;w,f/ 'Dvdkvkyfw,f qdkwmudk KIO taeeJY uefYuGufygw,fqdkwJhtaMumif;jyef pmudk 'DaeY ('DZifbmv 24&ufaeY) yJ taMumif;jyefvdkufygw,f'' [k ajymMum;cJhygonf/
Last edited by batoe; 12-31-2012 at 01:37 AM.
AungNN, badinf, BainnowSAYAR, barronbala, devilgrin89, Grace, honelay86, k-pooh, ko too, ktg, maykyalzin, mdychat, mgmgthan, MNO.BN, RunAtServer, zero6
12-31-2012 01:37 AM #8
'DZifbmv 26&uf 2012
ucsifjynfe,f rdk;nSif;blwm &Srf;ocsFdKif;teD; oHvrf;ydkif; wpfae&mwGif 'DZifbmv 26 &ufaeYn 10 em&D 0ef;usifcefYtcsdefu AHk;wpfvHk; aygufuGJrI jzpfyGm;cJhaMumif; od&onf/ tqdkyg AHk;aygufuGJrIaMumifh rdk;nSif;jrdKUtwGif; aetdrfrsm; wkefcgrI jzpfay:cJhjyD; xdcdkufrI r&SdaMumif; od&onf/ xdkYtjyif &xm;oHvrf; ysufpD;rIr&SdcJhaMumif;ESifh AHk;aygufuGJrI rjzpfay:rD tcsdefu rEåav;odkY xGufcGmrnfh rEåvm 58 tpkef&xm;onfh vrf;acsmfrI jzpfyGm;ojzifh rdk;nSif;blwmwGif &yfem;aecJhaMumif; od&onf/
AungNN, badinf, barronbala, devilgrin89, Grace, honelay86, k-pooh, ko too, ktg, maykyalzin, mdychat, mgmgthan, MNO.BN, PiNyat, RunAtServer, zero6
12-31-2012 02:00 AM #9
'DZifbmv 29&uf 2012
KIO/KIA A[dkXmecsKyf&Sd&m vdkifZmjrdKUwGif;udk avaMumif;wdkufcdkufrIrsm; jyKvkyfvmygu a&Smifwdrf;Edkif&ef AHk;cdkusif;rsm; wl;jcif;? vdkifZmacsmif; eHab; a&xGufaygufrsm;twGif 0ifa&mufcdkvHIjcif; tp&SdonfwdkYudk vdkifZmjrdKUwGif;ae jynfolrsm;rS MudKwifjyifqifrIrsm;udk 'DZifbmv 29 &ufaeYwGif ydkrdk jyKvkyfvsuf&Sdaeygonf/ 'DZifbmv 28 &ufaeY eHeufydkif;u KIO/KIA A[dkXmecsKyf&Sd&m vdkifZmjrdKUay: odkY tpdk;&\_ wdkufav,mOfESifh &[wf,mOfrsm; ysHoef;cJhjyD;aemuf vdkufZmjrdKUae jynfolrsm; xdwfvefYrIjzpfcJhjyD; avaMumif;wdkufcdkufrIrsm; &Sdvmygu tEå&m,fuif;ap&ef ,ckuJhodkY jyifqifrIrsm; jyKvkyfaejcif; jzpfygonf/ 'DZifbmv 29 &ufaeY rGef;vGJydkif;wGifvnf; tpdk;&\_ wdkufav,mOf wpfpif; vdkifZmjrdKU teD; ysHoef;oGm;cJhygonf/ 'DZifbmv 29 &ufaeYü vdkifZmXmecsKyfESifh 8 rdkifcefYtuGmwGif &Sdaom v*sm;,efwGif tpdk;&wyfrsm;ESifh KIA wyfrsm;tMum; wdkufcdkufrIrsm; qufvufjzpfay: aejyD; vufeufMuD; ypfcwfoHrsm;udk vdkifZmjrdKUay:rS rMumcP Mum;ae&ygonf/
(Credit to Eleven Media Group )
ucsifvGwfajrmufa&;tzGJY (KIO) vdkifZm A[dkXmecsKyfudk wyfrawmfrS avaMumif;jzifh pwif wdkufcdkufvmjcif;aMumifh vdkifZmjrdKU&Sd jynfolvlxk rsm;udk owdjzifhaexdkif&ef nGefMum;xm;jyD jzpfaMumif; vdkifZmtkyfcsKyfa&;rSL; AdkvfrSL; Kareng Naw Awn uajymonf/
xdkYjyif n9em&DrS tjyifrxGuf&ef trdefYxkwfxm;aMumif; aomMumaeYrS pum vdkifZmjrdKU&Sd aps;qdkifrsm;vnf; ydwfxm;&ef vrf;ray:vnf; um;? qdkifu,frsm;udk rxm;&ef nGefMum;xm;aMumif; od&onf/
vdkifZm&SdjynfoltcsdKUrSm w&kwfbufjcrf;odkY xGufajy;wdrf;a&SmifoGm; olrsm; vnf; &SdaMumif; vdkifZma'ocHrsm;uajymonf/
wkdufyGJawG jyif;xefaewmeJ hywfoufjyD; orw&Hk; nGefMum;a&;rSL; OD;aZmfaX;uawmh vrf;aMumif; &Sif;vif; wm jzpfw,fvdk hajymqdkygonf/
Last edited by batoe; 12-31-2012 at 02:08 AM.
AungDin, AungNN, badinf, BainnowSAYAR, barronbala, devilgrin89, Grace, hlaingkyaw, honelay86, k-pooh, khit, ko too, ktg, maykyalzin, mdychat, mgmgthan, MNO.BN, orjawlan, Oscar Htun, PiNyat, RunAtServer, zero6, zzz
12-31-2012 02:20 AM #10
'DZifbmv 30&uf 2012
ucsifppfyGJwGif jrefrmhwyfrawmfbufrS aMumufp&maumif;aom vufeufrsm;? av,mOfrsm;oHk;í xdk;ppfqifaejcif;udk jyif;jyif;xefxef uefYuGuf &IwfcsaMumif; 88rsdK;qufausmif;om;acgif;aqmifwpfOD;jzpfol udkjrat;u ajymMum;onf/
'DZifbm 30 &ufwGif usif;yaom ucsifNidrf;csrf;a&; owif;pm&Sif;vif; yGJwGif udkjrat;u 4if;\_yk*¾vdu tjrifudkajymMum;cJhjcif;jzpfonf/
"'g[m wpftkyfpk? tzGJUtpnf;wpfzGJUwnf;u vkyfwJhyGJr[kwfbl;/ 88 uvkyfwJh yGJr[kwfbl;qdkwmvnf; &Sif;&Sif;xyfajymyg&ap/ tJ'gaMumifh 88 taeeJY 'DrSmajymrSmr[kwfygbl;/ 'DunDtpfudkarmifESrawG&JUyGJrSm yl;aygif;yg0ifwufa&mufjcif;jzpfygw,f"[k qdkonf/
ucsifNidrf;csrf;a&;uGef&ufrS a':arpy,fjzLu "tpdk;&bufrS *seDAmuGefAif;&Sif;t& twdtvif;wm;jrpfxm;wJh *sufav,mOfeJY tajrmufawGoHk;aew,f/ taiGU&SLrd&if 15 rdepfavmuf rvIyf&Sm;EdkifwJh "mwkvdkY ,lq&wJh AHk;awGoHk;aew,f" [k olr\_xifjrifcsufukd ajymonf/
(Credit to7days news journal FB)
AungDin, badinf, BainnowSAYAR, barronbala, devilgrin89, Grace, GuruAM, hlaingkyaw, honelay86, ironhorse, k-pooh, khit, ko too, ktg, maykyalzin, mdychat, mgmgthan, MNO.BN, orjawlan, Oscar Htun, PiNyat, RunAtServer, thuthuaung, zero6